Baphinda enkantolo abakwaShembe - Ilanga News
Home Izindaba Baphinda enkantolo abakwaShembe
Baphinda enkantolo abakwaShembe
KUSAZOGUGA ama-phakethe emalungwini ebandla lamaNazaretha ohlangothi oluho-lwa yiNkosi Mduduzi “Nyazilwezulu” Shembe neNkosi Phinda “Kukhanyakwelanga” Shembe – abasembangweni wesihlalo sokuhola uhlangothi lwasebuhleni – njengoba aboNyazilwezulu sebe-dlulisela udaba eNkantolo yoMthethosisekelo.
NgoZibandlela (December), ILANGA licaphune ongumeluleki woNyazilwezulu kwezomthetho, uMnu Lizwi Ncwane, ethembisa ukubhalela abameli bokuKhanyakwelanga incwadi eza namangwevu amasha nezinselelo zomthetho ngalolu daba. Nebala ummeli wokuKhanyakwelanga, uMnu Trevor Nkosi uthi sebeyitholile kodwa isiqhamuka nonyawo olusha, olungazange luphonselwe inselelo selokhu kwaqala icala ngo-2011.
“Sebengena ngenxeba besebenzisa umthetho obizwa ngoProtocol 293 woMqaliwendlela (uMprofethi Isaiah Shembe). Lo mthetho uthi umholi uyophakamisa igama lalowo okuyothi uma ekhothama limenyezelwe ngosuku lomfihlo, bese ikomiti lebandla nalelo elelulekayo ahlangane alincome leli gama.
“Kulolu daba sibona ukuthi babona ukuthi bayihlabe esikhonkosini kanti bashaye phansi kwashunq’ uthuli, siyaya enkantolo sizobaphendula, simi ngomumo,” esho.
Uqhubeke wathi ubona ukuthi aboNyazi sebedlala umacashelana ukuqhuba isikhathi. Uthi njengamanje bazobathumelela izimpendulo zabo, ezinye ziye eNkantolo yo-Mthethosisekelo, kube nezimpikiswano bese inkantolo inquma usu-ku lokulalelwa kwesicelo sabo.
UMnu Ncwane uvumile ukuthi sebebabhalele incwadi abokuKhanyakwelanga – okwamanje abaziwa ngokuthi ngabaseThembezinhle – yiNkantolo yoMthethosisekelo nomgcinifa kuzwelonke mayelana nokuthi udaba luyaqhubeka.
“Sesingcweka ngomthetho manje, kuseyisiqalo lesi, lukhulu luyeza. Sithe uma sesicubungula isinqumo samajaji aseBloemfontein, sathola ukuthi azenzele owawo umthetho ngoProtocol 293 kaMqambiwendlela. Sifuna iNkantolo yoMthethosise-kelo uwabonise ukuphambuka kwawo,” kusho uMnu Ncwane.
Uqhubeke wathi kuseyilo uNyazi oluphikisa isinqumo saseBloemfontein. Mayelana namahemuhemu okuthi sebeshintsha igama lebandla, uthe bayohlala bengamaNazaretha, ngeke babe ngamaKrestu – njengoba kusho izimpukane eziluhlaza. Udaba lombango wobuholi bebandla laseBuhleni lwaqala ngomfihlo weNkosi Vimbeni “Thingolwenkosazane” Shembe – onguyise woNyazilwezulu – ngo-2011.
Kulo mfihlo iNkosi yamaQadi, uMqoqi Ngcobo, yamemezela kuqala ukuthi uThingo lwaba nesifiso sokuba uNyazi luhlale esihlalweni uma lona lwendela koyisemkhulu, kanti ummeli walo uMnu Zwelabantu Buthelezi wayefihle induku emqubeni, ephethe incwadi ekhomba iNkosi Vela Muhle “Misebeyelanga” Shembe engasekho emhlabeni.
Kwaba ukuklayeka kwebandla laseBuhleni. IMisebe yafaka udaba enkantolo kwaba yinzukazikeyi, kwaze kwaphuma isinqumo eNkantolo eNkulu yaseThekwini esakhishwa yiJaji Achmat Jappie sivuna iMisebe njengomholi owaqokwa wuThingo ngencwadi. Emuva kwalokho uNyazi lwasedlulisa isinqumo saya eMgungundlovu lwangaphumelela naseBloemfontein ngokunjalo njengoba manje selukweyokugcina inkantolo yezwe.
Previous articleI-sundowns idingise umdlali wase-argentina
Next articleSeyishayisa ngovalo iPirates